Emily Brontë. Nhetembo nhatu dzerudo kwemakore ake mazana maviri | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo waEmily Brontë nemunin'ina wake Patrick Bramwell Brontë. Manuscript enhetembo dzaGondal.
Nhasi, Chikunguru 30, tinopemberera zuva rekuzvarwa idzva ra Emily Bronte, munyori wechiChirungu uye mudetembi, weimwe yeiyo inonyanya kuzivikanwa uye inopenya mitsara yekunyora dzetsamba dzeSaxon. Mhemberero yakasarudzika nekuti ivo 200 makore. Icharangarirwa nekusingaperi se munyori we iyo yechinyakare yeVictorian kudanana mabhuku ayo ari Zvikomo zveWuthering, yake yega novel. Asi zvakare zvinodikanwa kusimbisa chimiro chake chedetembo chisingazivikanwe zvakanyanya, kana chakafukidzirwa, nekuda kwehukuru hwake semunyori wenhau. Naizvozvo, ndinonunura izvi kolme nhetembo dzerudo yako yekurumbidza ndangariro yako zvakare.
1.2 Huya ufambe neni
1.4 Guva remukadzi wangu
1.5 Ndinofanira kurara rini
Akazvarwa muna Chikunguru 30, 1818 en Thornton, Yorkshire, iri padyo nehanzvadzi dzake Charlotte (Jane eyre) uye Anne (Agnes grey), Imwe yeakanyanya kutaurwa eVictorian kudanana mabhuku. Kuvapo kwake, senge kwehanzvadzi dzake, kwakaratidzirwa ne hwakaoma hudiki, UN chimiro chekutanga kwazvo, kurasikirwa kwekutanga kwaamai vake uye hanzvadzi dzakura, iyo austerity yemufundisi weAnglican baba uye nehupenyu hunonetsa hwemunin'ina wake Branwell. Kungorarama 30 makore ndikasiya a shoma asi isingaenzaniswi nhaka yenhoroondo muhunhu hwayo uye inotevera simba.
Ndiine hutachiona hwakazvarwa kubva kune inofungidzira nyika inonzi Gondal, iyo yaakagovana nasisi vake Anne, nhetembo yerudo naEmily Brontë vanosanganisa manzwiro anopfachukira uye kukosha kwe nhetembo dzerudo iine zvakawanda zvehunhu izvo zvaizozove zvakakosha mune iyo nhetembo dzekukunda.
Zvakare, iyo bhiri uye kusimba yehunhu hwayo uye mavhesi ari zviitiko yeiyo yaizove nzira yake yekuenda kunoverengeka na Zvikomo zveWuthering. Kunyanya, mavara aHeatcliff, Catherine Earnshow kana Edgar Linton vatove vanozivikanwa mune vamwe. Asi pamberi penhetembo idzo dzaive zvakabudiswa pamwechete nehanzvadzi nhatu dziri pasi echikadzi mazita. Uye kunyangwe vasina kubudirira, vakadyara mbeu.
Ava vatatu vavo vakasaina naEmily.
Huya ufambe neni
iwe chete wakaropafadza mweya usingafi.
Taimbova tichida husiku hwehusiku
Kudzungaira nesinou pasina zvapupu.
Tichadzokera here kumafaro ekare?
Makore matema anomhanyisa
semakore mazhinji apfuura,
kusvikira ndafa pakatarisana nemusango
mumatombo makuru akaiswa mukati;
sezvo mwenje wemwedzi uchimhanya
kunge kunyemwerera, kwemanheru kunyemwerera.
Huya ufambe neni;
nguva shoma yapfuura takavapo
asi rufu rwabira kambani yedu
(Kufanana nemambakwedza aba dova)
Mumwe neumwe akatora madonhwe ari mukati mekushaya
kusvikira kwasara vaviri chete;
asi manzwiro angu achiri kupenya
nekuti mamuri anoramba akasimbiswa.
Usati kuvepo kwangu
Rudo rwevanhu runogona kuva rwechokwadi here?
Ruva reushamwari rinogona kufa here kutanga
uye kumutsazve mushure memakore mazhinji?
Kwete, kunyange vakagezwa nemisodzi,
Makomba anoviga anovhara hunde yawo,
Hupenyu hwehupenyu hwadzikira
uye girini haichazombodzoka.
Yakachengeteka kupfuura yekupedzisira kutya
isingadzivisike semakamuri epasi pevhu
kunogara vakafa nezvikonzero zvavo,
Nguva, isingaregi, inoparadzanisa moyo yese.
Guva remukadzi wangu
Shiri inogara mambakwedza asina kusimba,
Iyo lark inoteedzera mhepo mukunyarara,
Nyuchi dzinotamba pakati pemabhero eheather
Kuti vanovanza Mukadzi wangu akanaka.
Mhembwe yemusango pachifuva chake inotonhora,
Shiri dzesango dzinosimudza mapapiro adzo anodziya;
Uye Iye anonyemwerera kune wese munhu asina hanya,
Vakamusiya ega ari ega!
Ini ndakafungidzira izvozvo apo rakasviba madziro eguva rake
Yakachengetedza chimiro chayo chisina kusimba uye chevakadzi,
Hapana aigona kumutsa mufaro unodambura
Iyo ephemeral Chiedza chemufaro.
Vakafunga kuti kusuwa kwekusuwa kwaizopfuura
Kusasiya kana trace mumakore anotevera;
Asi aripi ese marwadzo izvozvi?
Uye kupi iyo misodzi?
Ngavarwire kukudzwa kwemweya,
Kana kune rima uye rakasimba mafaro,
Kugara kweNyika YeRufu
Iyo inoshanduka uye haina basa futi.
Uye kana maziso ako akatarisa nekuchema
Kusvikira sosi yemarwadzo yapera
Haazodzoki-kubva pakurara kwake kune rugare-
Kana kudzosera kugomera kwedu kusingabatsiri.
Furidzira, mhepo yekumadokero, pamusoro pechikomo chisina mvura:
Kugunun'una, hova dzezhizha!
Hapana kudikanwa kwemamwe manzwi
Kuchengeta mukadzi wangu muzororo rake.
Ndinofanira kurara rini
Oo, muawa yandinofanira kurara,
Ndichazviita ndisina kuzivikanwa,
Uye handinei nekuti mvura yanaya sei futi
Kana kana chando chakafukidza tsoka dzangu.
Denga rinopikira hapana zvishuwo zvemusango
Vanogona kuzadzikiswa, pamwe hafu.
Hero uye kutyisidzira kwaro,
Nemazimbe ayo asingadzimike
Haazombotumira kuda uku.
Naizvozvo ndinoti, ndichidzokorora chinhu chimwe chete,
Zvakadaro, uye kusvikira ndafa ndichati:
Vatatu Mwari mukati meiyi diki furemu
Vanorwa masikati neusiku.
Kudenga hakuzovachengeta vese, zvakadaro
Uye ivo vachave vangu kusvikira pakanganikwa
Vharai ini ndasara.
Oo, kana nguva ichitsvaga chipfuva changu kurota,
Hondo dzese dzinopera!
Nokuti zuva richauya apo ini ndinofanira kuzorora,
Uye kutambura uku hakuchazonditambudzi ini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Emily Brontë. Nhetembo nhatu dzerudo kwemakore ake mazana maviri
karla andreine akadaro
Pindura karla andreine
Dova Chain akadaro
Ini ndinoda hunyanzvi mukutaura kwayo kwakasiyana nekuti ndine chokwadi chekuti vakatakura mweya wemunyori wayo.
Pindura Rocío Cadena
Kuyeuka Herman Melville. 20 mitsara mikuru yemabasa ake